मोटोपना रोगको घर
दिनेश गौतम मंगलवार, आषाढ २०, २०७४
4240 पटक पढिएको
शालिकराम सापकोटा (४५) लाई फटाफट सिँढी चढ्न सकस पर्छ । माथि उक्लिँदै गर्दा बीचैमा स्वाँस्वाँ हुन्छ । साढे पाँच फिट उचाइका सापकोटाको तौल ८५ केजी छ । भन्छन्, ‘मोटोपनाकै कारण वास्तविक उमेरभन्दा अलि बूढो देखिएको पत्नीले गुनासो गर्छिन् ।’ नेपाल बार एसोसियसनका उपाध्यक्षसमेत रहेका सापकोटालाई शरीर स्लिम गराउने रहर छ । छरितो शरीर नहुँदा कतिपयको लगनगाँठो कस्नमै ढिलाइ भइरहेको छ । वजन धेरै भएका युवायुवतीलाई समयमै उपयुक्त जोडी नपाउँदा चिन्ता थपिएको छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक युवती भन्छिन्, ‘शरीर हेरेर केटाहरू ‘थाइराइड’ भएको शंका गर्छन् । फेरि फर्केर हात माग्न आउँदैनन् ।’मोटोपनको पिरलोबाट कलाकार पनि अछुतो छैनन् । हास्य कलाकार दीपाश्री निरौला (४२) लाई ७० केजी तौलले केही समस्या पारिरहेको छ । हाँस्दै भन्छिन्, ‘धेरै मोटी त होइन तर हेल्दीचाहिँ छु है ।’
मोटोपनालाई विगतमा समस्याका रूपमा हेरिए पनि अहिले चिकित्सकहरू रोगका रूपमा लिन्छन् । कम्मरको घेरा अर्थात् पेटको गोलाइ महिलाको ८० सेन्टिमिटर (३१.५ इन्च) र पुरुषको ९० (३५.५इन्च) सेन्टिमिटरभन्दा थोरै हुनुलाई सामान्य मानिन्छ । त्योभन्दा बढी भए मोटोपना मानिन्छ । पेट लाग्यो भने कम्मरभन्दा माथिको भागमा मोटोपना देखिन्छ । सन्तुलित तौल नभएको व्यक्ति वास्तविक उमेरभन्दा बूढो देखिन्छ । शरीरको उचाइको अनुपातमा हुनुपर्ने औसत तौलभन्दा शारीरिक तौल बढी हुनु नै मोटोपन हो ।
शरीरको लम्बाइ र संरचनाअनुसार वजन हुनुपर्छ । २७ भन्दा बढी बीएमआई (तौल र उचाइको सूचक) हुनुलाई मोटोपनका रूपमा लिइने त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी वरिष्ठ डायटिसियन नानीशोभा शाक्य बताउँछिन् । शरीरको तौललाई उचाइ (सेन्टिमिटर) ले दुई पटक भाग गर्दा आउने अंक नै बीएमआई हो । बीएमआई १८ देखि २५ सम्म हुनुलाई सामान्य मानिन्छ । पेटको आकारभन्दा पुठ्ठाको आकार ठूलो हुनु आकर्षक मानिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानिसको तौल र उचाइ हेर्दा शरीरको मांसपेशीको परिणाम तौल र उचाइको सूचक ४० भन्दा बढी हुनुलाई अत्यधिक मोटोपनका रूपमा लिइन्छ । ४० भन्दाबढी बीएमआई छ र जीवनशैली पनि असन्तुलित छ भने नसर्ने खालका रोगहरू लाग्ने सम्भावना धेरै हुने सम्बन्धित चिकित्सकहरू बताउँछन् । नसर्ने रोगहरूमा मधुमेह हुने सम्भावना अधिक हुन्छ ।
खाएको खाना (कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ) बाट शरीरले आवश्यक शक्ति प्राप्त गर्न नसकी रगतमा सामान्यभन्दा बढी ग्लुकोजको मात्रा भई निको नहुने दीर्घकालीन रोग नै मधुमेह हो । ३० वर्षभन्दा बढी उमेर भएका र व्यायाम नगर्ने निस्कृय जीवनशैली भएकाको शरीरको तौल र पेटको गोलाइ (नाइटोनिर )आवश्यक भन्दाबढी हुन्छ ।
ललितपुर, चापागाउँका सरोज दाहाल (२९) को वजन ९२ किलोग्राम छ । सात महिनादेखि नियमित बिहान दौडन थालेपछि सात केजी तौल घटाउन सफल भएको उनी मक्ख पर्दै सुनाउँछन् । भन्छन्, ‘पहिला खाइरहने बानी थियो । जंक फुडलगायत बजारमा जे पाइन्छ, त्यहीँ खान्थेँ । खाना खानेबित्तिकै टन्न पानी खाएर अफिस जान्थेँ ।’ शिक्षण अस्पतालकी वरिष्ठ डायटिसियन शाक्यको अनुभवमा व्यायाम नगर्ने, जंक फुड ,अत्यधिक चिल्लो खाद्यपदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिहरूमा मोटोपना पाइएको छ । भन्छिन्, ‘छोटो दूरी भए पनि हिँड्ने बानी पटक्कै छैन । कार वा मोटरसाइकलमा हुइँकिने प्रवृत्ति छ । त्यसले पनि मोटोपना बढाउनमा सहयोग पुर्‍याएको छ । कम सुत्यो भयो भने पनि मोटोपना बढ्ने गरेको पाइएको छ ।’ ‘हाइपोथाइरोडिज्म’ भएका महिलाहरूमा पनि मोटोपना देखिन्छ । उनीहरू थोरै खाना खाए पनि मोटाइहाल्छन् ।
बिहान पसिना निस्कने गरी आधा घण्टा मज्जाले दौडन्छन् । दैनिक जीवनयापनको शुरुवात शुद्ध पानी वा ‘ग्रिन टी’बाट गर्नु स्वस्थकर हुन्छ । डायटिसियन शाक्य भन्छिन्, ‘ग्रिन टी ले मोटोपना घटाउने त होइन , त्यसमा क्यालोरी कम हुन्छ । तर, सबै मोटोपन भएका व्यक्तिलाई ग्रिन टी प्रेसक्राइब गर्न सकिँदैन । व्यक्तिको शारीरिक अवस्था हेरेर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ बिहान उठेपछि मनतातो पानीमा कागती निचोरेर वा केही नुनसमेत थपेर पिउँदा मोटोपन भएका व्यक्तिलाई लाभ हुन्छ । कागतीपानी (सर्बत) ले पेटको बोसो घटाउनुका साथै पाचनक्रिया पनि नियमित गर्छ । व्यायाम गरिसकेपछि हलुका खाजा लिन सकिन्छ । गेडागुडी, सुप, लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
सुपले चाँडै पेट भरिन्छ । मोटोपना भएका व्यक्तिहरूले चिल्लो पदार्थ र कार्बोहाइड्रेट पाइने खाद्यपदार्थ सेवन गर्दा भने ध्यान पु¥याउनुपर्छ । वयस्क व्यक्तिले दिनभरि औसत तीन लिटर पानी पिउनुपर्छ । आधा घण्टाको अन्तरालमा पानी पिइरहनुपर्छ । पानी पिउँदा शरीरमा भएका विशाक्त पदार्थसमेत उत्सर्जन गर्नमा समेत सहयोग पुर्‍याउँछ ।कार्बोहाईडे«ट, प्रोटिन, भिटामिन, खनिज, चिल्लोपदार्थ र पानी शरीरलाई आवश्यक ६ वटा तत्वहरू हुन् । प्रत्येक छाकमा ६ वटा तत्वहरूको उचित परिमाणमा खानुपर्ने शाक्यको सुझाव छ । मासु कोलेस्टेरोल नबढ्ने खालको ‘लिन मिट’ (बोसो र छाला नभएको) खान सकिन्छ । ‘हत्केलाभरिको मासु खान सकिन्छ । हत्केलाको साइजमा एक सय पचास ग्राम मासु पर्छ,’ उनको सुझाव छ ।
मोटोपना भएको व्यक्तिलाई मुटुुको समस्या देखिनसक्ने भएकोले धेरैथरीको तरकारी खानुपर्ने डायटिसियनको सुझाव छ, ‘दिउँसो हल्का खाजा खाने र बेलुकी कम खानुपर्छ । बेलुका टन्न खानेहरूलाई मोटोपनले सताउन सक्छ ।’ दिनभरिमा तीन छाक खाने बीच–बीचमा थोरै क्यालोरी भएका खानाहरू खान सकिने सुझाव डायटिसियनहरूको छ । चिल्लोरहित भेजिटेबल सुप, जुस, मही लिनु लाभदायक हुन्छ । भोक लाग्दा कम क्यालोरी दिने खाद्य पदार्थहरू जस्तैः गाँजर, काँक्रो, कागतीको सर्बत खानु ठीक हुन्छ । बिहानको लन्चमा मकैको च्याँख्लाको भात वा ब्राउन राइस खाने गर्नुपर्छ । मिठाइ, गुलियो जुस र तेल बढी मात्रा भएका परिकार सेवन गर्नु हुँदैन ।
बेलुकाको डिनर बेलुका ७ बजेभित्र खानु उपयुक्त हुन्छ । खाना खाएको कम्तीमा पनि एक घण्टापछि मात्र सुत्नु उपयुक्त हुन्छ । आयुर्वेद चिकित्सकहरूका अनुसार, दैनिक एक, दुई दाना मरिच चपाउँदा पनि शरीरमा भएका बोसोहरू पगाल्छ । वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक प्रा.डा. डीबी रोकाका अनुसार, काँचो लसुन सेवन गर्दा शरीरमा भएको बोसो घट्न सहयोग पुर्‍याउँछ । भन्छन्, ‘बिहान दुई÷तीन केस्रा काँचो लसुन चपाएर कागती–पानी खाने हो भने मुटुरोग र मोटोपनाको समस्या घटाउन सहयोग पुग्छ ।’ अदुवा, लसुन, मरिच तथा दालचिनी जस्ता मसलाजन्य पदार्थ राखेर पकाएको तरकारीले रगतमा रहेको सुगरको मात्रालाई समेत सन्तुलनमा राख्छ ।
मोटो व्यक्तिले तौल सन्तुलनमा ल्याउन खाना जस्तै व्यायाममा पनि ध्यान दिनुपर्छ । बिहान सबेरै हिँड्ने वा हलुका व्यायाम गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. हरिहर खनालका अनुसार, मोटोपना भएका व्यक्तिले एरोबिक व्यायाम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस व्यायामअन्तर्गत हिँड्ने, दौडने, फुटबल, भलिबल, बास्केटबल, व्याडमिन्टन, पौडी, साइकल चलाउने र परेड खेल्नेलगायतका पर्छन् । व्यायाम गर्दा असल कोलेस्टेरोल (एचडीएल) बढाउँछ भने खराब कोलेस्टेरोल (एलडीएल तथा ट्रिग्लेसराइड) मा कमी ल्याउँछ । वजन घटाउन सहयोग गर्छ । मोटोपना कम हुन्छ । एक किलो वजन घटाउन सात हजार पाँच सय क्यालोरी ऊर्जा शरीर निकाल्नुपर्छ ।
३० साउन ०७३ मा बेरियाट्रिक सर्जरी गरेर बालाजु, काभ्रेस्थलीकी विन्दु पन्तको मोटोपना घटाइएको छ । सुतेको बेला घुर्ने र उच्च रक्तचापको समस्यासमेत बेहोरिरहेकी पन्तले ग्रान्डी अस्पतालमा बेरियाट्रिक तथा मेटाबोलिक सर्जरी (मोटोपना नियन्त्रण गर्ने शल्यक्रिया) गरेकी थिइन् । सर्जरी टिमका डा. राकेश शाहको नेतृत्वमा दुई घण्टा लगाएर उनको शल्यक्रिया गरिएको थियो । सर्जरी गरेपछि एक सय जनामध्ये करिब ७५ जनाले उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गर्नु नपर्ने डा. शाहको दाबी छ । सर्जरी ल्याप्रोस्कोपको सहायतामा गरिन्छ । अप्रेसन गरेको दिनमा नै बिरामी हिँडडुल गर्न सक्छन् । सेवा शुरु गरेदेखि हालसम्म दुई जना मोटोपनबाट पीडित व्यक्तिले सेवा लिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
छोटो दूरी भए पनि हिँड्ने बानी पटक्कै छैन। कार वा मोटरसाइकलमा हुइँकिने प्रवृत्तिा छ। त्यसले पनि मोटोपना बढाउन सहयोग पुर्‍याएको छ। नानीशोभा शाक्य वरिष्ठ डाइटिसिएन, त्रिवि शिक्षण अस्पताल